Oukitel U15S nyocha: iwu aluminom na 4 GB nke RAM maka € 150 | Gam akporosis
Oukitel U15S nyocha: iwu aluminom na 4 GB nke RAM maka € 150
Miguel Gaton | | Oukitel, Nyocha
N'ịga n'ihu na nyocha anyị banyere njedebe dị ala na nke etiti Asia, n'oge a ọ bụ oge nke Uukitel U15S, otu n'ime ndị smartphones na-oru na a nnọọ mpi price (na nke a ị nwere ike ịzụta ya ebe a naanị € 150) na a imewe na nkọwa na-esiwanye nso na Nsukka nke elu àmà, ihe ọbụna ihe ijuanya na-abịa site Oukitel na-emehiewo mgbe niile iji malite ọnụ na aghụghọ na a dịtụ mgbe ochie oyiyi na-akwanyere ihe e bu n'ahịa. Oukitel U15S bu ihe nlere anya mara mma nke oma mee nke aluminom nke ahụ na-esikwa na ihuenyo 5,5-inch, 4 GB nke RAM na 32 GB nke ROM. Want chọrọ ịmatakwu banyere ngwaọrụ a? Ọfọn, na-agụ ule anyị.
1 Mara mma aluminum imewe
3 Sistemụ arụmọrụ na nkọwa ndị ọzọ
5 Uru na ọghọm
6 Mmechi na ịzụta njikọ
7 Foto osisi
Mara mma aluminum imewe
Ihe mbu nke dakwasiri anyi mgbe anyi huru Oukitel U15S bu ihe mara nma ya, na ekele maka ojiji nke aluminum ionized dị ka ihe eji emepụta ihe maka ahụ ya. Dịka ị pụrụ ịhụ na foto dị n’elu, ọdịdị ya n’ozuzu ya yiri a iPhone 6, karịsịa ekele na ntinye nke igwefoto na flash nke zuru oke.
Na ihu ya nwere a 5,5 anụ ọhịa ahụ na ISP panel, mkpebi HD zuru ezu (1920 x 1080p) na nke Sharp rụpụtara, nke doro anya na-enye oge nkwanye ọzọ dị ka ọ bụ nnukwu ụlọ nrụpụta. Ngosipụta ahụ na-abịa na ngwụcha 2.5 D na a obere curvature, na-enweghị ịghọ ọnụ ọnụ ma na ya na aluminum ahu na-eme ka dum jikota n'ụzọ zuru okè. Na ọkwa arụmọrụ, ihuenyo ahụ kwadoro ma dị ntakịrị karịa ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na njedebe nke ọnụahịa a, na-apụ apụ ọkachasị n'akụkụ nlele dị mma ọ na-enye na nhụta na mpụga ọkụ.
Akụkụ ya bụ 15,1 x 7,6 x 0,76 centimeters na ịdị arọ nke gram 175 nke edoziri nke ọma maka njedebe nke nha a: Nke a nwere mmetụta dị mkpa na nha batrị ahụ, nke na naanị 2.450 mAh ọ bụ obere obere... ma ngwaọrụ ahụ enweghị n'ezie ohere ime ụlọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ idobe akara ngosi ya.
N'ime, U15S na-etinye ihe nhazi Isi MediaTek MT6750 nke na-arụ ọrụ na oke ọsọ nke 1,5 GHz na Mali-T860 GPU nke ya na 4 GB nke RAM ha na-enye ihe karịrị ezu arụmọrụ na-agba ọsọ egwuregwu na ngwa ọdịnala na ala. Na ọkwa foto, ọ na-abịa na igwefoto 13 MP na-agbanye aka na 16 MP nke arụpụtara site na Panasonic na 5 MP n'ihu igwefoto jikọtara ya na 8 MP nke na-emezu ozi ha n'ụzọ ziri ezi mana nke ahụ bụ otu n'ime isi adịghị ike nke ngwaọrụ ọ dị ezigbo mma ka nke a U15S. A na-ahụ nke a karịsịa mgbe ị na-edekọ vidiyo na ọnọdụ ọkụ dịtụ njọ, mgbe na ọnọdụ igwefoto nsonaazụ ya ka mma ma nọrọ n’etiti ọnụahịa ego a.
Na akụkụ nke njikọta, ọ bịara na-akwadoro Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS, WiFi 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n (2,4GHz), kaadị Dual-SIM nwere 4G LTE dakọtara na eriri 800 MHz eji maka 4G na Spain.
O nwekwara akara mkpisiaka agụ n'okpuru n'azụ igwefoto Ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma dịkwa mma iji ya.
Sistemụ arụmọrụ na nkọwa ndị ọzọ
Oukitel U15S biara A gam akporo 6.0 Omenala Marshmallow na ngwa 30 etinyegoro ngwa. Na ọkwa nke mmelite, ika ahụ n'onwe ya na-ahụ na enwere ike imelite ya na gam akporo 7.0 na-enweghị nsogbu.
Igbe ahụ gụnyere a ihuenyo nchebe na a sịlịkọn ikpe dị ka ọkọlọtọN'oge a anyị nwere ike ịnwe ama dị ka ngwa ngwa ozugbo anyị natara ya na-enweghị ichere ka ikpe ahụ ma ọ bụ onye nchekwa ga-abata iche na enweghị mmefu.
Nyochaa: Miguel Gaton
Onye edemede: 55%
Ọdịdị emechara nke ọma
4 GB nke Ram na 32 GB nke ROM
Batrị dị ala
Igwe foto nwere uche
Mmechi na ịzụta njikọ
Oukitel U15S bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ị na-achọ a mara mma e mere ekwentị na a ezi uche price. Ekwentị dị ike ka ị nwee ike igwu egwuregwu ma ọ bụ jiri ngwa ndị na-achọ ihe na-enweghị ọtụtụ nsogbu. Nanị ihe na-adịghị mma bụ ndụ batrị nke dị ntakịrị ma na ọkwa nke igwefoto anyị enweghị ike ịtụ anya nsonaazụ dị ukwuu. Ọnụ ya dị ihe dị ka € 150 na ị nwere ike ịzụta ya site ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Oukitel U15S nyocha: iwu aluminom na 4 GB nke RAM maka € 150
Nnọọ. Akpọtụrụ m Aukitel banyere batrị ma ha mesie m obi ike na ọ na-abịa na 2700 mah.
Otú ọ dị, n'ọtụtụ nyocha ị na-etinye ya na 2450 mah.
Nwere ike ikwenye m ozi a?
Nyocha nke LG X Power, ekwentị nwere oge 8 awa oge
ZTE Blade A520 na-enweta asambodo WiFi na ibe nkwado